နိုင်ငံ၂၁၀ကျော်၌ ငွေပေးချေနိုင်သော EASI Travel Master Card သမဝါယမဘဏ် စတင်ထုတ်ဝေ ~ The ICT.com.mm Blog
နိုင်ငံ၂၁၀ကျော်၌ ငွေပေးချေနိုင်သော EASI Travel Master Card သမဝါယမဘဏ် စတင်ထုတ်ဝေ
နိုင်ငံပေါင်း ၂၁၀ကျော်တွင် ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်နိုင်သော EASI Travel Master Cardကို သမဝါယမဘဏ်နှင့် Master Cardမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး ထုတ်ဝေခဲ့ကြောင်း သမဝါယမဘဏ်မှ CEO ဦးကျော်လင်း၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“သမဝါယမဘဏ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး အီလက်ထရောနစ် ငွေပေးချေမှုကို စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုလို ကြိုတင် ငွေပေးချေရသည့် EASI Travel Master Cardကို ထုတ်ဝေခွင့် ရသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်သည့်အခါ နိုင်ငံပေါင်း ၂၁၀ကျော်ရှိ ATMစက်များမှ ငွေထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်းစသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး Online ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် EASI Travel Master Cardကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းကတ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ငါးထောင်အထိ အများဆုံး ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကတ်အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အဆိုပါ ကတ်တွင် အနည်းဆုံး လက်ကျန်ငွေ ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်အထိ ချန်ထားရမည်ဟု ဆိုသည်။ အဆိုပါ ကတ်အသုံးပြုသည့်အတွက် ဝန်ဆောင်ခများအနေဖြင့် ကတ်လျှေက်လွှာခ ကျပ်ရှစ်ထောင်၊ လစဉ်ကြေး အမေရိကန်နှစ်ဒေါ်လာ၊ ပြည်ပ ATMစက်တွင် ငွေထုတ်ယူခ အမေရိကန်သုံးဒေါ်လာ၊ လက်ကျန်ငွေ ကြည့်ရှုခ၊ ငွေထပ်မံဖြည့်တင်းခ၊ ကတ်ပြန်လည်သုံးစွဲရန် လျှောက်ထားခတို့မှာ ကျပ်တစ်ထောင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး အစားထိုး ကတ်အသစ် ထပ်မံထုတ်ပေးခနှုန်းမှာ ကျပ်၁၀၀၀၀ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Master Cardအရှေ့တောင်အာရှ၏ Presidentဖြစ်သူ Mr.Mattew Driverက “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ အများစုဟာ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ အခြား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုမှု မရှိကြသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငွေပေးချေနိုင်ဖို့ အဆောက်အအုံများက အလျင်အမြန်ပဲ တိုးတက်လာပါပြီး။ ATMစက်တွေ၊ POS Terminalတွေနဲ့ ယခုဆိုလျှင် ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကတ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ကတ်ဟာ နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေကို ငွေသားတွေ အများကြီး ယူသွားဖို့လိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Master Cardသည် သမဝါယမဘဏ်ကို ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု ကွန်ရက်အတွက် ၂၀၁၂ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သော ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှုကတ်များအကြား ပထမဦးဆုံး ATM စက်တွင် ငွေသား ထုတ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ၂၀၁၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် သမဝါယမဘဏ်(CB Bank)၏ ATMစက်တွင် စတင် ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
Easi Travel Master Card
Newer နိုင်ငံတကာမှ ပန်းချီလက်ရာများ လောကနတ်တွင် ပြပွဲပြုလုပ်မည်
Older Danganronpa – The Animation
3 thoughts on “နိုင်ငံ၂၁၀ကျော်၌ ငွေပေးချေနိုင်သော EASI Travel Master Card သမဝါယမဘဏ် စတင်ထုတ်ဝေ”
ေဘးႏွစ္ဖက္က အန္ကယ္ၾကီးႏွစ္ေယာက္ တိတလိုလိုဘဲေနာ္…. 🙂
လံုးဝႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳပါတယ္ CB Bank. လာဖြင့္ပါ့မယ္။
Ko Gyi Thet Naing says: